Iindaba -Iindaba zokuqala Zithini iimpawu zokudityaniswa kwendibaniselwano kwindalo iphela?
Iindaba zokuqala Zithini iimpawu zokudibanisa izinto ngokudibeneyo?
Ukuhlanganiswa kwendalo yonke isebenzisa iimpawu zendlela yayo
I-torque kunye nentshukumo inokuhanjiswa ngokuthembekileyo. Iimpawu zokudityaniswa kwendalo zonke zezi: ulwakhiwo lunee-engile ezahlukileyo zokungena, kwaye ii-axial ezimbini ezibandakanya ii-angles zokudibanisa indalo zihlukile, ngokubanzi phakathi kwe-5 ° -45 °.
Ukusetyenziswa ngokudibeneyo kokudityaniswa
Ekudluliseni amandla okukhawulezisa kunye nokusebenza ngamandla, ezinye izinto ezihlanganisiweyo zinee-buffers, kwaye phantsi kwemeko yokuthambisa, zenziwe ukuba zijikeleze kunye ukuhambisa iinxalenye zoomatshini zesantya esiguqukayo. Kwaye uphucule ukusebenza okunamandla kokucheba. Ukudibanisa kuqulethwe ngamacandelo amabini, adibeneyo ngokulandelelana kunye ne-shaft yokuqhuba kunye ne-shaft eqhutywayo. Ngokubanzi, oomatshini bombane ikakhulu banxulunyaniswa nokudibanisa kunye nokusebenza koomatshini.
Kukho iintlobo ezithile zokudibanisa izinto ngokudibeneyo
Ukudibanisa kunemingxunya emibini edibeneyo. Ngenxa yeempazamo zokuvelisa kunye nofakelo, ukutshintsha kwesithuba kunye notshintsho lobushushu, isikhundla esimalunga nemingxunya emibini iya kutshintsha, kwaye ulungelelwaniso olungqongqo aluqinisekiswanga. Izinto ezenziweyo, nokuba zinako ukubuyekeza ukubekeka kwiindawo ezahlukeneyo ezinxulumene nokufuduswa, oko kukuthi, nokuba ingagcina umsebenzi woqhagamshelo kunye nenjongo yokuhlangana phantsi kwemeko yokufuduka. Coupling zingahlulwa zibe yemiqadi yokuhlanganisa eqinileyo, yemiqadi yokuhlangana kunye nokuhlangana nokhuseleko. Ezona ntlobo ziphambili zokuhlangana, iimpawu kunye nendima yazo kwicandelo lamagqabaza kwinkqubo yosasazo
Yemiqadi eziqinileyo kungadlulisa kuphela intshukumo kunye torque ngaphandle kweminye imisebenzi, kubandakanywa yemiqadi yokuhlanganisa kumacala amabini, yemiqadi yokuhlangana, coupling uqinisa, njl
Imihlanganisi eguqukayo yeFlexible coupling ngaphandle kwezinto ezi-elastic ayinakudlulisa kuphela intshukumo kunye ne-torque, kodwa ikwanazo needigri ezahlukeneyo zentshayelelo. Ukusebenza kwembuyekezo yomsasazo kunye ne-angular kubandakanya ukudibanisa izixhobo, ukudibanisa kwindalo iphela, ukuhlangana kwetyathanga, ukudibanisa isilayida, ukudibanisa uvalo, njl.
Ukudibana okuguqukayo kunye nezinto ezinokuhanjiswa kunokudlulisa intshukumo kunye ne-torque; ineedigri ezahlukeneyo zentshayelelo, intsebenzo yeradial kunye ne-angular performance; ikwanamadigri ahlukeneyo okunciphisa ukungcangcazela kunye nokuhluza, ukuphucula ukusebenza kwenkqubo yokuhambisa kubandakanya iindawo ezahlukeneyo ezinamathelayo kunye nezinto ezingezizo zesinyithi kunye nokuhlangana okuguqukayo ngezinto zensimbi. Ubume bokuhlanganiswa kwe-elastic ehlukile, uhanjiso luhlukile, kwaye indima kwinkqubo yokuhambisa nayo yahlukile.
Izihlanganisi zokhuselo eziguqukayo zinamanqanaba ahlukeneyo okusebenza kwembuyekezo, kubandakanya uhlobo lwepini, uhlobo lokungqubana, uhlobo lomgubo wamagnetic, uhlobo lwe-centrifugal, uhlobo lwe-hydraulic kunye nolunye udibaniso lokhuseleko
Ubungakanani kunye nolwalathiso lokufuduswa kwesihlobo kwezi zembe zimbini. Xa kunzima ukugcina ulungelelwaniso olungqongqo noluchanekileyo lweemingxunya ezimbini emva kofakelo kunye nohlengahlengiso, okanye xa imiphini emibini iya kuphazamisa ukufuduswa kwesihlobo ngexesha lenkqubo yokusebenza, ukuhlangana okuguqukayo kufuneka kutshintshwe. Umzekelo, xa ukufuduswa kweeradial kusisalathiso se-axial, islider coupling sinokukhethwa, kwaye ukufuduka kwe-angular okungena okanye ukunqamleza imiphini emibini kunokudityaniswa nokudityaniswa kwendalo iphela.
Ukuthembeka kunye nokusebenza kwendawo yokuhlangana. Ukudibanisa okungadingi ukuthambisa kuhlala kwenziwa ngezinto zentsimbi kwaye kunokuthenjwa ngakumbi; Ukudibanisa okufuna ukuthambisa kuthinteka ngokulula kwinqanaba lokuthambisa kwaye kungangcolisa indalo. Ukudibanisa okunezinto ezingezizo ezesinyithi ezinje ngerabha kunovakalelo kubushushu, imithombo yeendaba etshabalalisayo kunye nokukhanya okuqinileyo, kwaye bathambekele ekwaluphaleni.
Ngenxa yezizathu ezinje ngokuveliswa, ukufakelwa, ukulungelelaniswa komthwalo kunye notshintsho lobushushu, kunzima ukugcina ulungelelwaniso olungqongqo noluchanekileyo lweemigodi emibini emva kofakelo kunye nokulungiswa. Kukho inqanaba elithile lokufuduka kwindawo ye-x kunye ne-Y kunye ne-angle angle ye-CI. Xa ukufuduswa kwe-radial kukhulu, islider coupling siyazikhethela, kwaye ukufuduka kwe-angular kungena okanye kunqumle ishafts ezimbini kunokudityaniswa nokudibanisa indawo yonke. Xa ezi shafts zimbini zivelisa ukufuduswa kwesihlobo okongezelelekileyo ngenxa yokuphazamiseka ngexesha lokusebenza, kufuneka kukhethwe indawo ehlangana nayo.